Beautify keung wa: February 2012
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်နံရံက ပန်ချီကား
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 8:55 PM 1 comments
Soft words can win hard heart.
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 10:04 PM0comments
You should beautify for the world before you die.
flowere can beautify its.
တိုက်ပွဲဆို၇င် ပျင်းရိခြင်းဟာ မင်းရဲ့ရန်သူပါပဲ...။
Life is battle.If so, being lazy is your enemy.
(၂) ကျရောက်လတ္တံ သောဘေးအန္တရာယ်တို့မှ ကင်းလွတ်နိုင်ခြင်း။(၃) အပြစ်ကင်း၍ ကောင်းကျိုးပွားသည့် ဆောင်ရွက်ချက် ကိစ္စအ၀၀တို့ကို ပြီးစီးအောင်မြင် စေနိုင်ခြင်း။
(၄) အပြစ်ရှိ၍ မကောင်းကျိုး ဖြစ်စေမည့် ကျူးလွန်ခြင်းတို့မှ ရှောင်လွှဲနိုင်ခြင်း။(၅) အချုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သမျှ ကောင်းမြတ်သည့် ကိစ္စခပ်သိမ်းတို့ကို ပြီးငြိမ်းအောင်မြင်စေနိုင်ခြင်း။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 9:22 AM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 9:03 AM0comments